Burmese Articles - Page5- Results from #60
Copenhagenမြို့သည် မြို့ပေါင်း၄၀၏မြို့တော်ဝန်များစုံညီပွဲတော် (C40 Mayors summit)ကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လွန်ခဲ့သောလက လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုပွဲသို့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးအလေးအထားဆုံးနိုင်ငံများမှ မြို့တော်ဝန်များနှင့်မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲသူပေါင်း ၁၀၀၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်...
ကမ႓ာ့ရာသီဥတု ပိုမိုပူပြင်းလာနေခြင်း နှင့်အတူ အအေးပိုင်းဒေသများမှ ရေခဲပြင်များ အရည်ပျော်နှုန်း မြန်ဆန်လာခါ ကမ႓ာကြီး၏ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာများ၏ ရေမျက်နှာပြင်များကို ပိုမိုမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ပြင်နှင့် ထိစပ်မှုဧရိယာ များပြားပြီး မြေနိမ့်ဒေသများ သော တိုင်းပြည်နိုင်ငံများ၌ ကြီးမားသော ဘေးဒုက္ခများကို ဖ...
​(ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကို တားဆီးကာကွယ်ရာမှာ တာတွေဟာ အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တစ်မျိုးတည်း အပေါ်မှာ မှီခိုလွန်းနေတာက အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ခုကထဲက သိခဲ့ကြတဲ့အရာပါ။)မစ္စစ်စီပီ၊ မစ်ဆိုရီ၊ အိုဟိုင်ယိုး၊ အီလီနွာနှင့် အခြား များစွာသော အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြစ်ကြီးများအားလုံး၏ ...
ဘာေၾကာင့္ေရတိမ္ေရ၀ပ္ေဒသေတြက တန္ဖိုးရွိေနရတာလဲ? သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီေရတိမ္ေရ၀ပ္ေဒသေတြဟာ ျမိဳ ့ထဲနဲ ့ျမိဳ ့အနီးပါတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေရၾကီးေရလ်ွံမႈေတြ ၾကံဳေတြ ့လာရင္ ေတြ ့ရေလ့ရွိပါတယ္။ လူအမ်ားစုဟာ ရႊံႏြံေတြ စိမ့္ေျမေတြ ေရကန္ေတြ ကိုေတြ ့လိုက္ရင္ အနာဂါတ္မွာ အေဆာက္အဦးေတြေဆာက္မယ့္ေနရာ၊ လမ္းေ...
Sanitation Financing World Water Day 2020 #stakeholderengagement Rural Ayeyarwady Delta Water Resource Management waterMM National Water Resources Committee Ecosystem services